युगसम्बाद साप्ताहिक - यहाँ देशलाई सही नेतृत्व दिने कोही भएन
Friday, 10.18.2019, 05:15am (GMT+5.5) Home Contact
यहाँ देशलाई सही नेतृत्व दिने कोही भएन
Monday, 08.29.2011, 02:02pm (GMT+5.5)
आज यहाँ अराजक राज्य चलाइएको छ । जनताले दुई वर्षको म्याद दिएर पठाएको संविधानसभाले जनतालाई नसोधी आफूखुसी एक वर्ष तीन महिना म्याद थपेर पनि नपुगेर फेरि तीन महिना थप्न थालियो । निश्चित म्याद तोकिएको संसद् या संविधानसभाको म्याद आफूखुसी थप्नु र जनतालाई नसोध्नु अराजकता हो । एकपटक गल्ती गरे पनि दोहोरिन हुँदैनथ्यो । यस्तै हो भने निर्वाचन गर्नु र प्रतिनिधित्व भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । एकपटक चुनिएपछि तिनले जे गरे पनि हुने, जतिपटक म्याद थपेर खाए पनि हुने हो भने किन जनताको नाम लिनु र लोकतन्त्र-गणतन्त्र भनेर शब्द फेर्दै हिंड्नु प¥यो ? त्यसैले आजको स्थिति भनेको यहाँ अराजकताको चरम स्थिति हो ।
भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक माग गर्ने अन्ना हजारेलाई जनताले, संसद्ले, विपक्षी दलहरूले र संचार माध्यमहरूले समेत साथ दिनाले सरकार झुक्नुप¥यो । हजारेका पक्षमा देखिएको व्यापक जनसमर्थनको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । भारत बाहिर बस्नेहरूले समेत हजारेलाई समर्थन गरिदिंदा सरकार अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेर आखिर निर्णय सच्याउनै प¥यो । यो हो जनशक्तिको अजेयताको उदाहरण । तर नेपालमा राजनीति गर्छौं भन्नेहरू जनशक्तिमा विश्वास गर्दैनन् । जनशक्तिमा विश्वास गर्ने व्यक्ति या पार्टी आफैं अजेय हुन्छन्, जसरी हजारे देखिए । यहाँ त बलजफत जनतालाई थर्काएर, धम्क्याएर, हतियारले तर्साएर आफ्नो पक्ष बलियो देखाउने काम गरिन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य यही हो ।
क्षणिक दलीय स्वार्थका निम्ति सस्तो जनप्रियता हाँसिल गर्न खोज्नेहरूले आफ्नो देश, परिस्थिति र परम्पराको ख्यालै नगरी संघीयताका नारा लगाएर खलबली मच्चाउन जति सजिलो मानेका छन् त्यसले देशलाई अनेक टुक्रा पार्ने उपक्रम थालेको छ । संघीयता भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न दशौं गुणा कठिन छ । आज तत्काल त्यसको असर नदेखिएला, तर त्यसले देशमा जाति जातिबीच विभेद र विद्वेष फैलाएर देशवासीको एकता, सौहार्दता र सद्भावका ठाउँमा जातीय संघर्ष र अन्ततः विनाशलाई निम्त्याउने छ भन्ने कुरा हामीले आजै तुनामा बाँधेर राखे हुन्छ ।
संघीयता जनताले मागेका हुँदै होइनन्, नेताका दिमाखको अविवेकको उपज हो । संघीयताका दुष्परिणामप्रति नेता सचेत छैनन् । नेताहरू अहिले जसलाई जे भने खुसी हुन्छ त्यही भनिरहेका छन् । जनतालाई सही कुराको जानकारी दिनुसट्टा उल्टै भड्काइरहेका छन्, भ्रममा पारिरहेका छन् तैपनि जनमोर्चाका चित्रबहादुर के.सी., नेमकिपाका विजुक्छे र राप्रपा नेपालका कमल थापाले भने विरोध जारी राखेका छन् । संघीयताको उद्देश्य स्वायत्त शासन हो अर्थात् जनतालाई पर्याप्त अधिकार दिने हो । जसलाई हामी विकेन्द्रीकरण भन्छौं । हाम्रो जस्तो सानो देशमा स्थानीय निकायहरूलाई पर्याप्त अधिकार दिएर केन्द्रले राम्रो सुपरिवेक्षण गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ ।
झण्डै एक सय जनजातिका आ-आफ्नै धर्म, संस्कृति भए पनि एउटै धागोमा उनिएर रहेका नेपालीलाई संघीयताका कुरा उठाएर छिरल्नु आफैंले विनाश निम्त्याउनु हो । ती सबै जातिलाई समेल्ने काम संघीयताले गर्दैन । संघीयताले त फुटाउने र छिरल्ने काम मात्रै गर्छ । अहिले नै त यहाँ अराजक स्थिति देखिइसकेको छ भने भोलि एक जातिले अर्को जातिलाई हेप्ने, हियाउने र अधिकार वञ्चित गर्ने स्थिति आउँदा जातीय संघर्षलाई रोक्नसक्ने छैन र नेपालीहरू आपसमै काटमार गरेर सिद्धिने छन् ।
संघीयताको कुरा यहाँका नेताका मुखबाट भन्न लगाइएको मात्र हो, यो सबै नेपाललाई छिन्नभिन्न पार्ने भेदनीति हो । विभिन्न जानजातिको एकतामा अडिएको यो देशको सद्भाव खलबल्याएर कमजोर पार्ने जालसाजी भैरहेको छ । मिलेर बस्ने, बाँडेर खाने र एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो संस्कृतिमै प्रहार भैरहेको छ । आफ्नो देशप्रतिको दायित्व नबिर्सिने हो भने हामी नेपाली संघराज्यको भुलभुलैयामा पर्न हुँदैन । नत्र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अघिको भुरे टाकुरेको अवस्थाभन्दा पनि नराम्रो स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले संघीयता विदेशीको बहकाउ हो, हामीलाई फुटाउने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
यहाँ नेतैनेता छन्, तीमध्ये अधिकांश भँडुवा नेता मात्र भए, पार्टीका नेता मात्र भए, देशको नेता हुने कोही निस्केन । भोलि घोषित रुपमै संघ राज्य निर्माण भए भने पनि नेताको स्वार्थसिद्धिका लागि हुनेछन् र विभिन्न पार्टीमा बाँडिएका जनता आपसमै लड्ने-भिड्ने, मार्ने-मराउने स्थिति ल्याउने छन् । त्यसैले जनतालाई एक्ल्याउने होइन, एकमुष्ट बनाएर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै दृष्टिबाट अधिकार सम्पन्न, शिक्षित र सचेत बनाउनु आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा नेताहरूले बुझिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो । यहाँ त जनताका चाहना र मर्म एकातिर र नेताका स्वार्थ अर्कातिर भएर पो सबै कुरा विग्य्रो त !
यहाँ नागरिक अगुवा हौं भन्ने हजारौं छन् तर अन्ना हजारे जस्तो एउटा पनि निस्केनन् । ती अगुवा पनि कोही स्वतन्त्र कम्युनिष्ट, कोही स्वतन्त्र कांग्रेस, कोही स्वतन्त्र राप्रपा रे ! पार्टीका पुच्छर भिरेर पनि कोही स्वतन्त्र हुन्छ ? त्यस्तै स्थिति आफूलाई अधिकारकर्मी भन्नेहरूको पनि छ । सबै एकएक पार्टीका पछि दगुरेका छन्, नेताको चाकडी गर्छन्, तर आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक भन्न पनि छोड्दैनन् । यहाँ शिक्षक र विद्यार्थी त पार्टी पार्टीमा विभाजित लालमोहरिया छँदैथिए, डाक्टर-इञ्जिनियर, प्राज्ञ, उपकुलपतिहरू पनि ‘ब्राण्डेड’ भएर गए । त्यसै गरी प्रशासनिक कर्मचारी पनि पार्टीहरूकै पुच्छर भिरेर आफ्नो स्वतन्त्र प्रशासनिक चरित्र र अस्तित्वमै प्रश्नचिन्ह लगाएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । मूल कुरा देशलाई सही नेतृत्व दिने यहाँ कोही भएन, भँड्याउने मात्रै भए ।
बहुसंख्यक मन्त्री र सांसदले आफू देशका लागि मन्त्री र सांसद भएका हौं भन्ने नै नसोची ती पदलाई मफतको जागीर सम्झेजस्तो छ । अर्को खराबी के देखिएको छ भने सहमतिका नाममा सबै दल मिलेर भागवण्डा गरेर खाने । प्रजातन्त्र भनेको पक्ष-विपक्षको सन्तुलनमा विकसित हुने व्यवस्था हो । सत्ता पक्षमाथि निगरानी राख्ने काम विपक्षको हो, तर यहाँ त दुबैथरि या सबैथरि मिलेर चुस्न थालेपछि प्रजातन्त्र समाप्त भएर लुटतन्त्र सुरु भएको छ । राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी कसैले पूरा गरेनन्- न नेताले, न सांसदले र मन्त्रीले र न त दलहरूले नै । त्यसैले आज हामी पर्नसम्म पछि परेका छौं ।
सभासद्ज्यूहरू म्याद थप हुन्छ, भविष्य जे होला नआत्तिनुहोस् (08.29.2011)
राष्ट्रवादी सोच भए असम्भव केही छैन (08.22.2011)
सदावबहार संक्रमणकाल ः तरमार्ने मौका (08.22.2011)
श्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अर्धवार्षिक सरकारको शव परीक्षण (08.22.2011)
जनताका आशा, भरोसा र विश्वास टुट्दैछ (08.15.2011)
लोकतन्त्र र निर्वाचन ः एक टिप्पणी (08.15.2011)
हिजो र आज : जनताले भोगेको अनुभव (08.15.2011)
अपराध र अपराधीको साम्राज्यमा चिन्तनधारा पनि प्रदूषित हुनेरहेछ (08.15.2011)
कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकबाट उठेको प्रश्न : यादब देवकोटा (08.09.2011)
खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ? (08.09.2011)
गाईजात्राको मौसममा महागाईजात्राको भाँड नाच प्रदर्शनको प्रयास (08.09.2011)
राष्ट्र प्रयोगको वस्तु होइन, नेतामा चेतना जागोस् : यादब देवकोटा (06.20.2011)
बनाउन नसके पनि विगार्न त छाड्नोस् : महेश्वर शर्मा (06.20.2011)
कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी (06.20.2011)
राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ (06.06.2011)
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा (06.06.2011)
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना (06.06.2011)
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व (05.30.2011)
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)